sosegado : ယုံလား မယုံဘူးလား အမေရိကန်များ နှင့် Mystery Spots
Posted by sosegado at 10/04/2012 11:33:00 AM
"ယုံလား မယုံးဘူးလား ဆိုတာ အဓိကမကျ၊ ထိုသွားသောအချိန်လေးမှာ စိတ်ပျော်ရွင်မှု ရသွားခြင်းသည် တန်ဖိုးဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်၊"
ဟုတ်တယ်ဗျို့ တခါတခါကျတော့ ပညာသားပါပါ လိမ် တာကို တန်ဖိုးကြီး ပေးပြီး အလိမ်ခံရတာကိုက အရသာ လိုလိုဘာလိုလို..။ ;)
အဲဒီနေရာ တကယ်လို့ ထင်နေခဲ့တာ
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက အစောင်းကမ္ဘာကြီးထဲ ရောက်သွားတဲ့အခါ အတည့်တွေကို အတည့်တွေမှန်း သိသိကြီးနဲ့ပဲ စောင်းနေ သယောင်ယောင် လူတွေက ရောထွေး၊ ထင်မှတ်မှားပြီး fun ဖြစ်သွားကြတာပါ...၊
ကိုယ်သိထားတဲ့ ပုံသေအမှန်တရား ဆိုတာနဲ့ ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်း ဆက်စပ် တွေးမိစေတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ...။
အကောင်းမြင်ဝါဒလေးတွေသာ ဖြန့်ကျက်နေမယ်ဆိုရင် ဆိုစီရဲ့ အတွေးလေးတွေ အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်တာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အပြုသဘောကို ခုံမင်တဲ့သူက အနည်းစုဖြစ်နေလေတော့ အကြံဥာဏ်မပေးတတ်တော့ဘူးကွယ်။
ဗဟုသုတလေးတွေ အတွက်ကျေးဇူးပါအကို ..
အဲဒီနေရာလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်..လူ့ စိတ်ကလည်း ဆန်းသားနော်..ကိုဆီစီ အတွေးလေးတွေ တကယ်ကောင်းတယ်..
လူတွေ ဖန်တီးထားတာ ဆိုရင် ဘယ်လို ဖန်တီးတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ သံလိုက်စက်ကွင်း ရှိတာ သုံးပြီး ဖန်တီးတယ် ဆိုရင်တောင် သိမှတ်စရာပါ။
မှာ အိမ်ကို စောင်းပြီး ဆောက်ထားတယ် ဆိုပေမဲ့ ရေ အနှိမ့်ကနေ အမြင့်ကို တက်လာတာတော့ ဘယ်လို ဖန်တီးမလဲ
My homepage ; steuerberaterin-stuebner.de
massive amount work? I'm completely new to runningablog however I do write in my diary daily. I'd like to startablog so I can share my experience and
My page: paper towel holders
Also see my site: fifty cent coupons
Also visit my website - wholesale products
ဒီဘလော့ကို ခုမှစဖတ်ဖူးတာပါ။ တင်ပြပုံတွေရော တင်ပြတဲ့ ရှုထောင့်တွေရော အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပွင့်လင်းစွာ သဘောထားကွဲလွဲ တတ်တဲ့ အကြောင်း လေး ကို သဘောကျတယ်။နောက် သူတပါးရဲ့ဘဝ သူတပါးရဲ့ ရွေးချယ်မှု ကို လက်မခံသော်လည်း လေးစားတတ်ကြတာလေးက အတုယူစ၇ာ လို့မြင်မိပါတယ်။ဒါမှလည်းငြိမ်းချမ်းမှာကိုး။အဲဒါလေးကဘဲ ဒီမှာ theme လေးဖြစ်မယ်လို့လည်း ယူဆမိပါတယ်။ ဥာဏ်မှီသလောက်သုံးသပ် ကြည့်မိတာပါလေ။ တကယ်တော့ကမ္ဘာကြီး လှနေတာ အဲဒီကွဲပြားမှုတွေကြောင့်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်တတ်ရင် မတူညီမူဆိုတာဟာ စွမ်းအားတွေ ပဲလေ။ ကိုယ်နဲ့ တူတဲ့သူကိုမှ မေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီမေတ္တာ မငြိမ်းချမ်းစေဘူး အတ္တတွေပါနေလို့ပေါ့ အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။